Kooxda Manchester United oo wadahadal la furtay xiddig ka tirsan Bayern Munich – Gool FM
Kooxda Manchester United oo wadahadal la furtay xiddig ka tirsan Bayern Munich
Haaruun June 11, 2020
(Manchester) 11 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo warramayaa in ay wadahadallo la furtay xiddiga Naadiga Bayern Munich ee Corentin Tolisso.
25-sano jirkaan, kaasoo haatan ku maqan dhaawac canqawga ah ayaa dhaliyay saddex gool, waxaana loo diiwaangaliyay shan caawin ah 24 kulan oo uu u saftay kooxdiisa intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2019-20.
Tolisso ayaa inta badan ku dhibtooday inuu boos joogto ah helo xilli ciyaareedkan, laakiin qandaraaskiisa iminka ee garoonka Allianz Arena ayaa dhacaya dhammaadka xagaaga 2022-ka.
Warbixin dhowaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in Man United ay xiisayneysay heshiiska xiddiga reer France, sida laga soo xigtay RMC Sport, Kooxda haysata 20-ka jeer horyaalka Ingariiska ayaa haatan wadahadallo la bilowday xiddigan khadka dhexe.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Bayern Munich ay diyaar u tahay inay ku iibiso 35 milyan oo euro oo u dhiganta 30 milyan oo gini suuqa soo socda, kaasoo socon kara ilaa bisha October, sababo la xiriira faafaha Coronavirus.
Red Devils ayaa sidoo kale la la xiriirinayaa ciyaaryahanka Naadiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, laakiin waxaa lagu soo warramayaa inay ka walaacsan yihiin inay heshiis 115 milyan oo gini ah la galaan xilligan.
Real Madrid oo kooxda Atletico Madrid ka dalbatay inay isticmaasho garoonka Wanda Metropolitano… (Miyaa loo ogolaaday?)